Adobe Creative Suite CS5 - Soo dejiso nooca tijaabada ah | Abuurista khadka tooska ah
Jawharad | | Design Graphic, Naqshadeynta Webka, General, Qalabka Naqshadeynta, Khayraadka
Shalay nooca cusub ee Adobe Suite loogu talagalay naqshadeynta, ah Adobe Creative Suite CS5 wixii intaa ka dambeeyayna waan awoodnaa kala soo bax nooca tijaabada ah in uu bogga rasmiga ahl inaad aragto oo aad tijaabiso shaqooyinka cusub barnaamijyadooda iyo inta horumar tan nooca cusub.
Waan awoodnaa kala soo bixi noocyada tijaabada ah ee barnaamijyada soo socda:
Suite Hal abuur leh 5 Naqshad Lacageed
Uruurinta Master-ka CS5
Ka dib Raadka CS5
Intaa waxaa dheer sidoo kale waxaa jira noocyo tijaabo ah oo ah barnaamijyo kale oo Adobe ah sida Acrobat Reader 9, Photoshop LIghtroom 2 iyo Photoshop Elements 8.
Si aad u soo dejiso noocyada tijaabada ah waxaad ka heli kartaa Bogga rasmiga ah ee Adobe adoo gujinaya halkan.
Cusboonaysiinta: Waxaan ka baranay, mahadnaqda faallooyinka ka yimid Pedro Piñeiro, in nooca tijaabada lagu heli doono Ingiriis dhammaadka Abriil iyo Isbaanish bartamaha Maajo.
Sida aad ku arki karto websaydhka, waxay sheegaysaa inaad soo dejisan karto nooca tijaabada ah, laakiin sida muuqata weli lama heli karo ... waan ka xumahay dhibaatada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Adobe Creative Suite CS5 - Soo Degso Nooca Tijaabada
Isku day fiican Iyo istiraatiijiyad wanaagsan oo lagu kasbado akhristayaasha ...
Carlos Bocanegra sawirka meeleynta dijo
Waxaan ka imid Mexico, halkanna ma soo bandhigi karo soo dejinta sheyga, kaliya ii soo dir si aan u sameeyo ogeysiis, wax caawimaad ah ama hagid ah?
Ku jawaab Carlos Bocanegra
Buenas daahitaan. Waxaan ka imid Argentina, waxaan ka shaqeeyaa shirkad raadineysa inay tijaabiso CS5, mana la heli karo si loo soo dejiyo. Waxaan la hadlay taageerada Adobe ee Latin America, oo ii sheegay in badeecada iibka ah aan weli la heli karin, ugu yaraan halkan, sidoo kalena aan la soo degsaneyn Tijaabada. Nooca Ingiriisiga ah waxaa la heli doonaa oo keliya dhammaadka Abriil, nooca Isbaanishkana waxaa la heli doonaa bartamaha Maajo. Waxaan rajeynayaa inay tani waxtar kuu leedahay, oo haddii qof uu hayo macluumaad ku saabsan sida loo soo degsado Tijaabooyinka taariikhahan ka hor, way fiicnaan lahayd in la ogaado. Mahadsanid, slds.
Jawaab Pedro Piñeiro
Si fiican baad u ogtahay in ilaa dhamaadka bisha aan wax soo degsasho iyo tijaabin intan ka yar, ay tahay hab doqonimo ah oo dadka loogu keenayo bogga, wadar ahaan si ay hadhow wax kuugu sheegaan
Ku socota maamulayaasha boggan. Waxaan fahansanahay in caydu aysan aheyn tan ugu haboon ee faallo laga bixin karo maqaal, laakiin aysan aheyn tan ugu haboon ee la tirtiri karo faallooyinka la sheegay sababtaas. Waxaa jira siyaabo fara badan oo "wax looga beddelo" faallo si ay ugu sii ahaato khadka tooska ah kuwa kale inay akhriyaan, iyadoon loo baahnayn in la sameeyo faafreeb. Sababtoo ah, tan ugu liidata, maqaalkani wuxuu ahaa mid guuleystay, tan iyo markii aan dhammaanteen halkan u nimid maxaa yeelay waxay bixiyeen soo dejinta Adobe CS5 Suite, taas oo, kaliya aan laga heli karin boggan, laakiin sidoo kale aan laga heli karin bogga rasmiga ah ee Adobe. . Waa inaad yeelataa xoogaa iswaafaqsan marka aad maqaal ku daabacayso shabakadda.
Pedro, waan tifaftiray faallada ... qaanuunka loogu talagalay Creativos Online ayaa ah in faallooyinka aflagaadada la tirtiro, waqtigan waxaan sameeyay wax ka reeban.
Sida aad ku arki karto bogga Adobe, waxay leedahay, bilawgii, inaad soo degsan karto nooca tijaabada ah ka dibna wuxuu leeyahay waa inaad saxiixdo iyo wixii la mid ah ... Hore ayaan ugu dhigay boostada cusbooneysiin iyo raali gelin dhib ku ah booqdayaasha internetka ee Creativos. Ujeedkeennu maaha inaan cidna khiyaanno.
Waad salaaman tahay G. Berrio. Hagaag halkaas ayaa loogu talagalay sixitaanka, waligeed ma xuma in la aqoonsado qalad, iyo haddii wax laga qaban karo xitaa ka sii fiican.
Ku saabsan xeerarka, siyaasadaha amniga, iwm. Waan ogahay iyaga maxaa yeelay waxay ku badan yihiin dhammaan meelaha oo dhan, waxayna ila tahay inay fiicnaadaan, maxaa yeelay sidaan ku iri maqaalka kale: «... halkaas caydu ma aha tan ugu habboon ee faallo laga bixiyo maqaal »
Waad ku mahadsantahay markaa inaad si dhab ah wax u qaadatay Slds.
Ugu jawaab abdiel
SAWIRRADA PAOLA dijo
Soo bandhigiddii Gold Sys, waxaan ka helay astaamaha cusub ee qolka mid aad u xiiso badan, gaar ahaan waxa lagu samayn karo walxaha lagu sameeyo rashka.
Jawaab PAOLA CUADROS
flash this CS5 wuxuu u dhoofiyaa html5 si looga daawado ipad iyo iphone.
ma u baahanahay inaan dhoofiyo feylasha flash-ka si aan ugu muujiyo ipad iyo iphone ???